Inona ny VPN? Ahoana no fisafidianana iray? | Martech Zone
Inona ny VPN? Ahoana no fisafidianana iray?
Talata, Jolay 14, 2020 Alakamisy, Jolay 16, 2020 Douglas Karr
Nandritra ny taona maro dia nieritreritra aho fa fampidiram-bola tsara ny fananana birao… nanome ny mpanjifako fahatsapana fa milamina sy mahomby ny orinasako, manome toerana ho an'ny mpiasako sy ny mpifanaraka amiko ary loharanom-pireharehana ho ahy izany.
Ny zava-misy dia tsy nitsidika ny birao ny mpanjifako ary, rehefa nahenaiko ny lisitr'ireo mpanjifako ary nampitomboiko ny vola ampiasain'ny tsirairay, dia nitombo hatrany aho ary nipetraka foana ny biraoko matetika. Nandany vola be izany… lafo kokoa ny toeran'ny birao noho ny findramam-bola.
Izaho dia miasa eo anelanelan'ny fotodrafitrasa miaraka amin'ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, hotely, fivarotana kafe ary eo an-toerana miaraka amin'ireo mpanjifako. Ny iray amin'ireo mpanjifako aza dia nanome ahy ny toeram-piantsonako mba hiasako.
Na dia mitazona tamba-jotra salama mihidy ho an'ny besinimaro aza ny mpanjifako dia tsy mitovy amin'ny tranokala sy ny fivarotana kafe izany. Ny tena izy dia ny ankamaroan'ireo tambajotram-pifandraisana ireo dia misokatra amin'ny fitsikilovana. Miaraka amin'ireo mari-pahaizana sy fananana ara-tsaina iasako isan'andro, tsy azoko atao fotsiny ny manao risoriso ny fifandraisako ho an'ny besinimaro. Izay no Tambajotra tsy miankina virtoaly tonga amin'ny filalaovana.
A VPN, na tranonkala virtoaly virtoaly, dia tonelina azo antoka eo anelanelan'ny fitaovanao sy ny Internet. Ny VPN dia ampiasaina hiarovana ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny fitsangatsanganana, ny fanelingelenana ary ny sivana. VPNs afaka miasa ho proxy ihany koa, ahafahanao misaron-tava na manova ny toerana misy anao ary mitety tranonkala tsy mitonona anarana na aiza na aiza tianao.
Ho an'ny fitsangatsanganana an-tsipiriany momba ny atao hoe VPN, azonao atao koa ny mijery ny lesona ifandraisan'ny Surfshark, Inona no atao hoe VPN?
Nahoana no mampiasa VPN?
Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fifandraisana amin'ny Internet anao dia sady voahidy no alefa amin'ny toerana hafa, misy tombony maro azo amin'ny fampiasana Virtual Private Network:
Afeno ny IP sy ny toerana misy anao - Mampiasà VPN hanafenana ny adiresy IP anao sy ny toerana misy anao amin'ireo tranokala sy mpijirika.
Ampidiro ny fifandraisana - Ny VPN tsara dia mampiasa encryption mahery 256-bit mba hiarovana ny data-nao. Mizaha avy amin'ireo teboka mafana Wi-Fi toy ny seranam-piaramanidina sy ny cafe mahalala ny teny miafinao, mailaka, sary, angona banky ary fampahalalana saro-pady hafa tsy azo sakanana.
Topazo maso na aiza na aiza - Alefaso amin'ny seho HD haingana ny seho sy sary mihetsikao amin'ny fitaovana rehetra. Nanatsara ny tamba-jotra izahay mba hanomezana ny hafainganam-pandeha avo indrindra tsy misy fetran'ny bandwidth. Sintomy ny zava-drehetra ao anatin'ny segondra, ary mifampiresaka video miaraka amin'ny buffering kely.
Sakano ny tranokala voasivana - Vahao ny tranokala sy serivisy mora foana toa ny Facebook, Twitter, Skype, Youtube, ary Gmail. Raiso izay tadiavinao, na dia lazaina aminao aza fa tsy misy izany any amin'ny firenenao, na raha any amin'ny tambajotra sekoly na birao izay mametra ny fidirana ianao.
Tsy misy fanaraha-maso - Atsaharo ny fitsikilovan'ny governemanta, ny mpitantana ny tamba-jotra ary ny ISP anao.
Tsy misy lasibatra geolocated - Amin'ny fanafenana ny adiresy IP sy ny toerana misy anao, ny ExpressVPN dia manasarotra ny tranokala sy serivisy hampiakatra vidiny avo kokoa na hampiseho doka kendrena miorina amin'ny toerana. Aza atao lany vola be loatra amin'ny fialan-tsasatra na baiko an-tserasera.
Satria manafina ny adiresy IP sy ny toerana misy ahy ny VPN, dia manome fomba tsara hanandramana ireo tranokalan'ny mpanjifako ihany koa aho hahazoana antoka fa hahazo ny traikefan'ny mpampiasa sahaza azy ireo mpitsidika tsy fantatra anarana.
Ahoana ny fisafidianana VPN
Tsy ny serivisy Virtual Private Network dia noforonina mitovy. Misy antony maromaro hisafidianana ny iray hafa. Miaraka amina mpanome tolotra an-jatony maro, mamaky a Famerenana Tunnelbear ary ny fisafidianana ny tsara dia midika hoe fanatanterahana ny fifandanjana marina eo amin'ny serivisy, ny fampiasana sy ny vidiny mora.
Toerana jeografia - Rehefa miditra amin'ny Internet ianao amin'ny alàlan'ny VPN, ny fonosana angon-drakitra rehetra avy amin'ny mpizara lavitra mankany amin'ny solosainao na fitaovana finday dia tsy maintsy mandalo amin'ireo mpizara ao amin'ny mpamatsy VPN anao. Ho an'ny fampisehoana farany ambony indrindra, safidio VPN ho an'ny PC misy mpizara eran'izao tontolo izao. Mazava ho azy, ny fampanantenan'ny VPN momba ny fanatontosana manerantany dia tsy manome antoka ny fahombiazana tena tsara, saingy famantarana lehibe iray fa mandroso ny fotodrafitrasan'ny mpamatsy ary afaka mahavita fampisehoana avo.
passante - Ny ankamaroan'ny orinasam-pandraharahana dia manolotra VPN anatiny. Raha manana bandwidth maro izy ireo, mahafinaritra izany. Na izany aza, ny fiasana amin'ny VPN tsy manana fahaiza-manao dia hampiadana ny olona rehetra izay mifandray aminy mankany anaty mandady.
Fanohanana finday - Ny configurations VPN taloha dia somary maharary, saingy ny rafitra miasa maoderina dia tafiditra ao anaty fahafaha-miasa VPN. Hamarino tsara fa miara-miasa amin'ny serivisy VPN ianao izay manana fahaiza-miasa amin'ny birao sy finday.
tsiambaratelo - Tokony ho fantatrao tsara foana fa tsy manangona na mizara ny mombamomba anao ny mpamatsy anao ary tsy manara-maso ny hetsika ataonao. Ataovy ao an-tsaina fa ny fampanantenan'ny tsiambaratelo tanteraka sy ny gazety tsy dia midika akory izany fa azo antoka izany. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia maro ny tantara ratsy tamin'ny tambajotra. Soso-kevitra ny hisafidianana VPN ho an'ny PC amin'ny mpamatsy foibe tsy any Eropa na Amerika.
Speed - Ny VPN ambony dia miaro ny fiainanao manokana, saingy mamela anao hanohy hanao izay tianao amin'ny Internet, anisan'izany ny fijerena horonantsary avo lenta, filalaovana lalao an-tserasera, fizahana Internet, ary fahalalana bebe kokoa momba ny zava-bitan'ny teknolojia. Aza mino dokam-barotra. Zahao foana ny hevitra an-tserasera ary ataovy ny fitsapana anao. Rehefa manandrana ny hafainganam-pandehan'ny serivisy VPN ho an'ny solosaina ianao dia manaova fitsapana maro amin'ny ora samihafa amin'ny andronao.
Price - Tokony ho vonona handany vola ianao raha hampiasa VPN tsara indrindra. Ny serivisy maimaimpoana dia mety mety amin'ny fampiasana indray mandeha, saingy mamela betsaka ny irina raha ampiasaina isan'andro. VPN maimaim-poana ho an'ny solosaina Windows sy Mac mazàna dia manana fetra fifamoivoizana na fetran'ny hafainganana. Ny vaovao tsara dia ny ankamaroan'ny mpamatsy VPN an'ny PC mamela anao hitsapa ny serivisy, hanombatombana ny zava-bitany ary raha misy tsy mety dia hahazo tamberina ianao.
Ny fanadihadian'ny mpanjifa sy ny matihanina dia mety mahasoa rehefa misafidy tolotra tena mitovy. Ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra mamaritra hoe tsara na ratsy ny serivisy VPN aorian'ny herinandro sy volana maro ampiasaina. Mitadiava ny mahatsara sy maharatsy azy dia mitsikera. Tsy misy serivisy tonga lafatra 100%, fa ianao kosa tokony mbola misafidy ny mety indrindra satria ny VPN dia teknolojia ho avy.
nisafidy aho ExpressVPN satria manana toerana mpizara 160 manerana ny firenena 94 izy, mampiasa encryption 256-bit, manana rindrambaiko manatsara ny toerana misy anao ary manana vidiny sy fanohanana lehibe. Raha vantany vao manokatra ny Mac aho na mifandray amin'ny tamba-jotra amin'ny iPhone dia hitako ny VPN mifandray ary miarina aho ary mandeha! Tsy mila manao na inona na inona aho raha te-configure na hifandray amin'ny fotoana rehetra… mandeha ho azy daholo izany.
Mahazoa 30 andro maimaim-poana amin'ny ExpressVPN
Fampahafantarana: mahazo 30 andro tsy misy ExpressVPN ho an'ny olona tsirairay misoratra anarana aho.
Tags: ExpressVPNsurfsharktunnelbeartranonkala virtoaly virtoalyVPNinona nyinona ny vpn
Pulse: Ampitomboy ny fiovam-po 10% amin'ny porofo ara-tsosialy
Ireo olana ara-dalàna ambony indrindra amin'ny bilaogy